Home / Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana / Faucets fandroana indroa ho an'ny trano fandroana indroa / WOWOW Faucet fandroana volamena misy borosy 4 inch Faucet fandroana 3 Hole RV fandroana fandroana ho an'ny milentika 2 Fitaovana zava-poana miaraka amin'ny fantsom-pivarotana fantsom-pivarotana foibe 360-Degree Swout Spout
Miorina tsara amin'ny vy miendrika metaly hahamora ny fiasa sy ny fifehezana ny mari-pana.
Ny valizy kapila vita amin'ny keramika dia mihoatra ny fenitra maharitra lava amin'ny indostria, miantoka fahombiazana maharitra ho an'ny fiainana
4 Inch Fametrahana Loatra telo: Tonga miaraka amina tatatra, fonon-tanana sy fonon-tànana vita amin'ny rano mafana sy mangatsiaka voamarin'ny cUPC, fonosana feno ary mora apetraka.
Fitaovana baskety retro sy tsotra: Volamena, mafana sy mihaja, mamorona trano fandroana mendri-kaja sy kanto ho anao. Ny famaranana miborosy dia afaka manampy anao hanohitra ny harafesina sy ny harafesina amin'ny fiainana isan'andro.
Mora ampiasaina: Ny fihodinan'ny 360 degre, ny famolavolana arc ambony, dia afaka mampitombo ny faritra fanadiovana, hitondra fahafaha-manao bebe kokoa amin'ny fiainanao isan'andro. Ny fantsom-pandroana roa-fandroana dia mamela anao hifehy mora foana ny hafanana mafana sy mangatsiaka
Kalitao avo lenta: Tongotra varahina sy fananganana miantoka faharetana sy fiankinana; Cartridge kapila vita amin'ny seramika tsy mitete. Ny spout faucet lavatory vita amin'ny aerator ABS dia afaka manampy anao hitahiry rano. (Ity aerator ity dia azo alaina mivantana amin'ny tananao mba hanadio)
Sokajy: Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana, Faucets fandroana indroa ho an'ny trano fandroana indroa Tags: Volavola volamena, Fandraisana roa